Kusvira Hure muNight Club Tipperarys – Short Story. – VanodaZvinhu
Kusvira Hure muNight Club Tipperarys – Short Story.
Ndakasvika ndichiziva zvandaida ndaitsvaga nyini. Ndakatarisa ndirikure ndokuona hure ndokufamba kuenda kwariri. Ndakamubvunza zita rake akati anonzi Blessing. Ndikati short time marii zvikanzi $10 ndikati kupi. Akambomira achifunga ndokuzoti ini semurume nditsvage.
Ndakati huya timbotamba hedu mwana aive akabatana iyeye achigona kutambisa chiuno. Ndakamudhonzera kurima ndokugara pachair iye akamira achindipa lapdance. Semunhu anga ane kaskirt kadiki hazvina kunetsa kuti maoko angu abate nyini yake. Akatanga kuchemerera ndikati hapana chekumirira ndakasimuka ndokuenda toilet ndikadzoka ndakatoseta condom rangu. Ndakadzoka ndokugara pachair paye iye paakati agare pamusoro pangu akavunduka achinzwa mboro ichimutsemura nepakati.
Club yanga yakazara vanhu vachitamba Zim Dancehall zvekuti hapana akanzwa Blessing achichema nekunakirwa nemboro. Ndakarova kunge engine ndokufamba nebhora sezvo team yanga yakarohwa. Ndakamusvira mwana up and down kusvika ndatunda. Ndakamusimudza ndokuona a few people around us vakatitarisa. Ndakaziva kuti ndogona kubatwa neSecurity. Ndakangomutambidza $10 yake ndokubuda ndakananga kumba atleast nyere dzanga dzadzikira.
by DrSviro · Published May 3, 2015
Short story Aunty Shamwari yamhamha
by DrSviro · Published January 26, 2015
by DrSviro · Published January 18, 2016
Next story Kusvira mhata mwana ane mhata hombe
Previous story Kusvira Janet WemaZigaro